Madaxda iyo ciidamada jabhadda OLF oo lagu soo dhoweyeey Itoobiya - Halbeeg News
Madaxda iyo ciidamada jabhadda OLF oo lagu soo dhoweyeey Itoobiya
ADDIS ABABA (HALBEEG) – Magaalo madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa waxaa shalay oo Sabti ahayd si diirran loogu soo dhoweeyey, qaar kamid ah madaxda ugu sarreysa Jamhadda Xoreynt Oromada (OLF), taas oo dhowaan laga saaray liiska ururrada ay Dowladda Itoobiya u aqoonsan tahay argagixisada.
Boqollaal dadweyne ah oo kamid ah taageerayaasha jamhadda Oromada ayaa isugu soo baxay fagaaraha Meskel Square ee magaalada Addis Ababa, iyadoo sidoo kale dibadbaxyo waaweyn oo loogu dabbaaldegayo arrintani ka dhaceen qaybo kamid ah gobolka Oromada.
Madaxda OLF ee shalay Addis Ababa gaaray waxaa kamid ah Hoggaamiyaha OLF Dawud Ibsa. Isagoo la hadlayey taageerayaashiisa isugu soo baxay fagaaraha Maskel Square, wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in muddo dheer kaddib uu dalkiisa hooyo dib ugu soo laabto.
“Waan ku faraxsanahay in aan halkan joogo kaddib 26 sano oon halgan ka wadnay dalka dibaddiisa” ayuu yiri isagoo sii raaciyey “Waxaanu qayb ka noqon doonnaa hadda wixii ka dambeeya isbeddelka, annaga oo sii joogteyn doonna halganka nabadeed”
Dawud Ibsa ayaa sidoo kale sheegay in dalka Itoobiya ay maanta ka muuqdaan isbedelladii siyaasadeed ee OLF muddada dheer usoo halgamaysay, arrintaasoo uu ku tilmaamay ‘wax aad loogu farxo oo dhiirigelin mudan’ taas isagoo sharraxaya waxaa hadalladiisii kamid ahaa
“Halganka waxaanu ugu jirnay in aanu keeno isbedellada aan maanta dalka Itoobiya uga jeedno oo kale, maanta waxaan aragnaa isbedello wanagsan oo ay ugu muhiimsan tahay sarreynta sharciga, waana sababta aan halkan [Addis Ababa] u nimid”
Dhinca kale, waxaa isla maalinnimadii shalay dalka Itoobiya dib ugu soo laabtay ku dhowaad 1,500 oo ka tirsan dagaalyahannada jamhadda OLF, kuwaas oo kasoo ruuqaansaday dhinaca dalka ay Itoobiya deriska yihiin ee Eritrea.
Jabhadda OLF oo bishii July laga saaray liiska ururrada argagixisada ee dalka Itoobiya, waxay August 8, 2018 si rasmi ah heshiis nabadeed u kala saxiixdeen dowladda Itoobiya ee uu hoggaamiyo Ra’iisul Waraaha isbeddel doonka ah ee Abiy Axmad.
Qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaasi dhigayey waxaa kamid ah in jabhadda OLF joojiso kacdoonka hubeysan, taas beddelkeedana hab nabadeed kusoo bandhigto afkaarteeda siyaasadeed, iyo in hadda kadib madaxda jabhaddu si xor ah shirarkooda siyaasadeed ugu qabsan karaan gudaha dalka Itoobiya xilli kasta oo ay doonaan.
Duufaanta Mangkhut oo 12 qof ku dishay dalka Filibbiin
Xaaladda caafimaad ee Xildhibaan Booroow oo laga dayrinayo